विदेशी मुद्रा संचय गर्ने रास्ट्रहरुमा दक्षिण कोरिया आठौँ नम्बरमा ! – Korea Pati
August 6, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on विदेशी मुद्रा संचय गर्ने रास्ट्रहरुमा दक्षिण कोरिया आठौँ नम्बरमा !
दक्षिण कोरियाको विदेशी मुद्रा सन्चितीले नयाँ रे’कर्ड बनाएको छ। यस्तो सन्चिती कोरियाको इतिहासमा अहिले सम्मकै सबैभन्दा धे’रै पुगेको छ।
जुलाई महिनामा अमेरिकी डलर क’मजोर हुन पुग्दा कोरियाको डलर बाहेकका सम्पति बढ्न पुगि सन्चिती उ’च्च हुन पुगेको हो। कोरियाको केन्द्रिय बैंकले बुधबार प्रकाशित गरेको रि’पोर्टमा विदेशी मुद्रा संचिती बढेको देखिएको हो।
कोरियाको बिदेशी सेयरमा लगानी जुलाई अ’न्तिममा आइपुग्दा ४ सय १४.९ बिलियन डलर रहेको देखिएको छ। यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा ४.४४ बिलियन डलरले घ’टेको हो। तर विदेशी मुद्रा डिपोजिट गत महिनाभन्दा ८.९२ बिलियन डलरले बढेको पाइएको छ। जुलाई महिना समाप्तिसम्म बिदेशी मुद्रा डिपोजिट ३०.८ बिलियन डलर रहेको देखिएको छ भने सुनको संचितीमा कुनै ब’दलाव देखिएको छैन। कोरियासँग ४.७९ बिलियन डलर मूल्य वरावरको सुन संचिती रहेको देखिएको छ। दक्षिण कोरिया विदेशी मुद्रा संचितिका हिसाबले विश्वकै आठौं ठूलो राष्ट्र हो।ईपिएस साथी